Mamwe Masangano Akazvimirira Oshora Zvakabuda paReferendamu
Kurume 20, 2013
HARARE — Sangano reNational Constitutional Assembly, NCA, nemamwe masangano ange achipikisa gwaro rebumbiro idzva rakatambirwa mureferendamu yakaitwa neMugovera ari kuramba kutambira zvakabuda muferendamu iyi achiti zvinhu hazvina kufambiswa nemazvo.
Vachitaura nevatori venhau muHarare neChitatu, mukuru we International Socialist Organization, uye vari nyanzvi inodzidzisa zvemitemo pa University of Zimbabwe, VaMunyaradzi Gwisai, vati referendamu haina kuitwa zvakanaka sezvo vese vaipikisa vasina kupihwa mukana wekutaura nyaya yavo padzinhepfenyuro nemapepanhau ehurumende.
Vachitaurawo pamusangano uyu, sachigaro veNCA, vari zvakare mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe, Professor Lovemore Madhuku, vatiwo misangano yavo yakawanda yakavhiringwa nemapurisa uye vamwe vatungamiriri wemapato ari muhurumende vaishandisa mashoko ekuvanyomba pamisangano yekutsigira bumbiro rakanyorwa neCopac.
Vatiwo mapato ese ari muhurumende yemubatanidzwa pamwe neCopac vakashandisa mari yakawanda zviri kunze kwemutemo vachitsigira bumbiro reCopac iro vati hariunzi hutongi wejekerere munyika.
VaMadhuku vapomerawo veZimbabwe Electoral Commission mhosva yekushanda nemapato ari muhurumende nemasangano aitsigira bumbiro iri.
VaMadhuku, VaGwisai, mutungamiri weMDC 99, VaJob Sikhala, pamwe nemunyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vachimirira chimwe chikwata chevashandi munyika, vashorawo zvikwata zveMDC zviri muhurumende nekushanda neZanu PF mukuvadzvinyirira panguva yeferendamu. Vati kudzvinyirirwa kwavakaitwa ndiko kuchaitwa zvikwata izvi neZanu PF munguva yesarudzo.
Varume ava vati kusungwa kwevashandi vemumahofisi emutungamiriri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu, Amai Beatrice Mtetwa, zuva rimwe referendamu ichangobva kuitwa, kunoratidza pachena chinangwa cheZanu PF vakati zvikwata zveMDC zvichazodemba mune remangwana kana zvikaramba zvichitamba nembada sezvazvakaita pareferendamu.
VaMajongwe vati zvikwata zveMDC zvinofanira kushanda zvakasimba kuti zvikunde Zanu PF musarudzo dzichaitwa munyika vachiti bato iri (Zanu PF) ratonyanyoipisisa kudarika zvarange riri musarudzo dzemuna 2008.
Masangano aya ati pari zvino ave kumirira kuti sarudzo dziitwe uye ati achirwisana nehurmende inenge yavepo kudzamara nyika yave nebumbiro rakanaka.
Mumwe wemasachigaro eCopac, VaPaul Mangwana veZanu PF, vaudzawo vatori venhau kuti komiti yavo inofara chose nebasa ravakaita pamwe nekutambirwa kwebumbiro idzva.
Pamashoko aVa Madhuku nevamwe vavo, mumwe wemasachigaro eCopac, VaDouglas Mwonzora eMDC-T, vati mashoko aya haana maturo uye mashoko evanhu vakakundwa.